मध्यरातमा निद्राबाट ब्युँझदा भुलेर पनि नगर्नुस् यी ५ काम ! - VOICE OF NEPAL
३० बैशाख २०७६, सोमबार १६:४१
600 ??? ???????
कोही मानिसहरु मध्यरातमा बिउँझने गर्छन् । ब्युँझिएपछि फेरि निदाउँन कष्ट गर्दा पनि उनीहरु निदाउन सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा धेरै मानिसहरुले गर्न नहुने काम गरिरहेका हुन्छन् ।